ငယ်သွားလဲချိန်မှာ သွားတွေပြွတ်ပြီး ပေါက်လာတယ် . . .
—–၊ (သွားနှင့် ခံတွင်းဘက်ဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦး) ၊—– Q. ကျွန်မကလေးငယ် သွားလဲချိန်မှာ သွားတွေပြွတ်ပြီး ပေါက်လာပါတယ်။ စိုးရိမ်သင့်ပါသလား ဆရာ။ A. သွားတွေပြွတ်ပြီး ပေါက်တာက အကြောင်းရှိပါတယ်။ မေးရိုးက သေးငယ်ပြီး ကြီးထွားမှုက နှေးတာကြောင့် ကလေးသွားတွေက နေရာမဖယ်ပေးသေးချိန်မှာ...
သက်ရှည်ကျန်းမာစေရန် လိုက်နာသင့်သော ရိုးစင်းလွယ်ကူသည့် နည်းများ
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— ကျန်းမာရေးကို အလေးထား ဂရုစိုက်တာကြောင့် သက်ရှည်ကျန်းမာတဲ့ ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သက်ရှည်ကျန်းမာတဲ့ ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ရာ လူတိုင်း နေ့စဉ်လိုက်နာသင့်တဲ့ အလွယ်နည်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလံ စတဲ့ သဘာဝအပင်ထွက်...
—၊ ပါမောက္ခဦးမောင်မောင်ခိုင် (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. အခုခေတ်မှာ နားကြပ်တပ်ပြီး ဖုန်းနဲ့ သီချင်းနားထောင်တာကြောင့် နားအူကြတယ်။ နားအူတာက တခြားဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့်ကော ဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ဖုန်းနဲ့ နားကြပ်တပ်ပြီး သီချင်းနားထောင်လို့...